China 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI USB3.0 Type-C SD / TF Docking station for Surface Pro 7 mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
7in 1 USB3.0 Type-C3.0 mankany HDMI USB3.0 Type-C SD/TF Docking station ho an'ny Surface Pro 7
3* USB3.0 A/F (5Gbps)
Type-C(tahirin-kevitra5Gbps)+1* SD/TF (2.0)
• Teraka ho an'ny Surface pro 7: Surface Pro 7 usb c hub dia misy seranana 6, 4K@ 30Hz HDMI Port, USB- C Port (Famindrana Data Ihany), USB 3.0 roa, SD&TF/Micro SD Card Reader).Fanamarihana: Mifanaraka amin'ny Microsoft Surface Pro 7 ihany. Tsy mifanaraka amin'ny Surface Go/Surface Pro 3, 4, 5, 6, Surface Pro X. Ny dock surface Pro 7 dia tsy hifanaraka tsara amin'ny surface anao raha misy fonon-tanana fiarovana eo amboniny.
• Hi-Res 4K HDMI: Ny seranan-tsambo USB c mankany amin'ny seranan-tsambo HDMI, dia manohana ny famahana horonan-tsary hatramin'ny 4K@ 30Hz ary mampiseho malalaka ny fampisehoana avo lenta amin'ny solosainao amin'ny ankamaroan'ny HDTV, monitor na projector miaraka amin'ny seranana HDMI, mitondra anao tsara kokoa. traikefa mijery.
• Famindrana angon-drakitra haingana be: Surface Pro 7 Adapter dock dia manolotra hafainganam-pandeha 5Gbps ho an'ny seranan-tsambo USB 3.0 roa, mamindra haingana kokoa, mitahiry fotoana betsaka ary mankafy ny fandefasana data ao anatin'ny segondra.Zarao avy hatrany ilay fotoana manan-danja.Ity USB hub ity dia miasa amin'ny kapila U, totozy, fitendry ary fitaovana USB hafa.
• Wide Compatibility: Type- C Port (famindrana angon-drakitra ihany, tsy manohana ny famandrihana herinaratra) Support mamaky karatra TF sy karatra SD miaraka.Mifanaraka amin'ny SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, TF, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Mini SD, UHS-I karatra hatramin'ny 512GB.
• Portable & Compact: Mifanaraka tsara amin'ny kojakoja Surface Pro 7 anao ny fijery aliminioma sliver habakabaka tsara tarehy sy ny sisiny mivalona mainty.Ny lanja maivana dia mety amin'ny dia na ny fitsangatsanganana ara-barotra.Manohana rafitra Windows 10, 8, 7, XP.Ampidiro fotsiny ary milalao, tsy mila mpamily, manatsara ny fahombiazan'ny asanao.
F: Nahoana no tsy fantatra ny hub USB-C?
A: Avereno azafady ny fitaovana ary ampifandraiso indray ny hub.
F: Nahoana ny HDMI no tsy mandeha rehefa mampifandray ny hub aho?
A: Voalohany, azafady hamafiso ny tariby rehetra ao anatin'izany
Cable HDMI, tariby USB-C dia mifandray tsara.
Faharoa, tsidiho azafady ny "Setting Display".
Surface Pro 7, jereo raha hita tsara ilay izy,monitor (tokony hampiseho ny TV/Monitor modely No.),amin'ny Surface Pro 7.
Fahatelo, jereo azafady ny loharanon'ny vidéo,Ny TV/Monitor dia marina na tsia miaraka amin'ny port Whichnifandray ny tariby HDMI (toy ny HDMI1/ HDMI2/solosaina).
Raha marina daholo ny dingana 1, 2, 3, fa mbola misy,tsy misy sary eo amin'ny monitor, angamba ny hub SC01.
F: Inona no karazana seranan-tsambo C ampiasaina?
A: Ny famindrana angon-drakitra ihany, tsy manohana ny famandrihana herinaratra.
F: Mifanaraka amin'ny fitaovana 2.0 ve izany?
A: azo antoka, ny doking station mifanaraka amin'ny iray USB 2.0 seranana sy roa USB 3.0 seranana.
F: Mandalo ve ny angon-drakitra fanohanana USB c port?
A: Ry mpividy, ny port USB 3.0 dia manohana ny famindrana angon-drakitra 5Gbps ao anatin'ny segondra.
F: Moa ve ny port type c port manohana ny fiampangana ny surface pro 7?
A: Salama, ny USB hub type c seranan-tsambo fitaterana angona ihany, tsy manohana charing.Mba diniho ny hevitra.
teo aloha: 6 in 1 USB3.0+ mini DP mankany HDMI+USB3.0 + SD/TF Docking station for Surface Pro 4
Manaraka: 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 mankany HDMI Type-C SD/TF Docking station for Surface Pro 7